I-Small Town Mansion - I-Airbnb
I-Small Town Mansion
Guthrie Center, Iowa, i-United States
Itholakala nje amamayela ayi-15 enyakatho ye-I80, le ndlu enhle yasekuqaleni kuka-1900 Sears & Roebuck isenkabeni yeGuthrie Center. Indlu enhle lapho ungahlala khona ngaphandle kuvulandi ongaphambili noma ukhahlele izinyawo zakho egumbini lokuhlala elikhulu. Iqoqo elikhulu lezincwadi lizoheha noma yimuphi othanda ukufunda. Indawo yokupaka yomgwaqo eyanele yamaloli omsebenzi amakhulu nama-UHauls. Igalaji lezimoto ezimbili nalo liyatholakala ukuze ulisebenzise. Indlu yonke ingeyakho ukuze ujabulele, uphumule futhi uphumule!
Eduze kwedolobha iGuthrie Center. Itholakala kumamayela angu-15 enyakatho ye-I 80.
I-HDTV engu-42" ene- Apple TV
IGuthrie Center iyidolobha elincane elihle elinabantu abahle abanobungane! Idolobhana lisebenza kanzima ukugcina indawo yalo yedolobha futhi liwasekela ngempela amabhizinisi endawo. Ngaphansi kwamamayela ayi-10 ukuya enyakatho kuneSpringbrook State Park enhle. Indawo enhle yokuhamba, ukugijima, ibhayisikili noma ujabulele ipikiniki. Amamayela ayi-15 ukuya eMpumalanga yidolobha lasePanora. ILake Panorama National Golf Course, inkundla yemigodi engu-18, itholakala echibini elizimele kodwa ivulekele umphakathi.
Siyakuthanda ukwazi izivakashi zethu! Uma ungathanda ukuhlangana nathi sicela usazise. Sicela uzizwe ukhululekile ukuthumela umbhalo noma ushayele ku-712-830-9007.